Ukuqwashisa okwandayo mayelana nokwamukelwa kwezifutho ze-trigger emisebenzini ehlukahlukene kuzobonakala kuyisithako esibalulekile sokukhula ngesikhathi sokubikezela sika-2021-2031. Izifutho ze-trigger zisetshenziselwa ukufafaza izinhlobo ezahlukene zoketshezi. Ngokuvamile zenziwe ngepulasitiki ye-polypropylene (PP). I...
I-Trigger Sprayer Market: Uhlolojikelele
Ngokombiko wakamuva wemakethe oshicilelwe yi-Transparency Market Research emakethe ye-trigger sprayer yesikhathi sika-2021-2031 (lapho u-2021 kuya ku-2031 kuyisikhathi sokubikezela futhi u-2020 unyaka wokuqala), ubhubhane lwe-COVID-19 lungenye yezinto ezibalulekile. obhekene nokukhula kwe-trigger...
Ukucatshangelwa kwemvelo kanye nezingxoxo
Ngingathanda ukukhuluma ngodaba lwamanje lokuvikelwa kwemvelo.Kubantu abajwayelekile, ukuqwashisa ngokuvikelwa kwemvelo kuye kwashintsha kancane kancane kusukela ekubeni buthaka kuya kokulula.Isibonelo, ukuhlukaniswa kwezibi nsuku zonke, ukugaywa kabusha kwemfucuza, ukonga amanzi nogesi.Inkampani yethu nayo izingcingo...